搜索 Dalidda 的结果：
dalidda：，daḷidda a．m．[Sk．daridra] 貧的，窮困的，乞食.
dalidda：，daḷidda a．m．[Sk．daridra] 貧しき，困窮の，乞食.
dalidda：daḷidda a．m．[Sk．daridra] 貧しき，困窮の，乞食．~kammakāra贱しい傭人
Dalidda，﹐贫穷。S.46.46./V，100.：“Sattannaṁ kho，bhikkhu，bojjhaṅgānaṁ abhāvitattā abahulīkatattā ‘daliddo’ti vuccati.（比丘！不修习、不多修七觉支，称为贫穷。）
[dalidda+a．dala+ida．dalidda duggatiyaṃ，a，dala vidāraṇe vā．ido，dvittaṃ．，ṭī.739．dala+idda．dalati duggatabhāvaṃ gacchatīti daliddo．ka．661．（-rū.671．nīti，dhā.1va4-5．nīti，sutta.13va2）．thī-nitea aliddāç daliddī．（daridra-saṃç daridda-prāç addhamāgadhīç daradu-sī）]
[ဒလိဒ္ဒ+အ။ ဒလ+ဣဒ။ ဒလိဒ္ဒ ဒုဂ္ဂတိယံ၊ အ၊ ဒလ ဝိဒါရဏေ ဝါ။ ဣဒေါ၊ ဒွိတ္တံ။ ဓာန်၊ဋီ။၇၃၉။ ဒလ+ဣဒ္ဒ။ ဒလတိ ဒုဂ္ဂတဘာဝံ ဂစ္ဆတီတိ ဒလိဒ္ဒေါ။ ကစ္စည်း။ ၆၆၁။ （-ရူ။၆၇၁။ နီတိ၊ဓာ။၁ဝ၄-၅။ နီတိ၊သုတ္တ။၁၃ဝ၂）။ ထီ-၌ အလိဒ္ဒါ，ဒလိဒ္ဒီ။ （ဒရိဒြ-သံ，ဒရိဒ္ဒ-ပြာ，အဒ္ဓမာဂဓီ，ဒရဒု-သီဟိုဠ်）]
Dalidda，& Daḷidda （adj.-n.） [Sk．daridra，to daridrāti，Intens．to drāti run （see dava），in meaning cp．addhika wayfarer=poor] vagrant，strolling，poor，needy，wretched；avagabond，beggar -- （l：） Vin.II，159； S.I，96 （opp．aḍḍha）； A.II，57，203； III，351； IV，219； V，43； Pug.51； VvA.299 （ḷ：） M.II，73； S.V，100，384，404； Vv201 （=duggata VvA.101）； DA.I，298； PvA.227； Sdhp.89，528．（Page 315）
dalidda：sự nghèo đói
（၁） မရှိ-ဆင်းရဲ-သော သူ။ သူဆင်းရဲ၊ အောက်တန်းစား၊ （က） ခက်ခက်ခဲခဲ တောင်းရမ်းနိုင်မှ လိုရာရသော၊ ဆင်းရဲငြိုငြင်စွာ အသက်မွေးရသော၊ ဥစ္စာ-မဲ့-မွဲ-ပစ္စည်းနဲ-နွမ်းပါး-သော၊သူ။ （ခ） ဗောဇ္ဈင်တရား မရှိသော၊ သူ။ （ဂ） သူတော်ကောင်းတရား ခုနစ်ပါး မရှိသော၊ သူ။ （ဃ） သြဇာ-အာဏာ-မရှိသော၊ အစိုးမရသော၊ သူ။ （င） အထီးကျန်သော၊ ခိုကိုးရာ မဲ့သောသူ၊ သနားထိုက်သော၊ သူ။ （၂） ဆင်းရဲနွမ်းပါးရာ အခါစသည်။ （၃） ဆင်းရဲ-နွမ်းပါး-သူ၏ အဖြစ်။ （၄） လျော့ပေါ့-လျော့ရဲသော（အကျင့် စသည်）။ （၅） ဒလိဒ္ဒသုတ်။ （ဆင်းရဲ-နွမ်းပါး-သော၊ လိုလျက် နေသော၊ မွဲသော၊ ဖြုခါသော။ P.S.D.）။ ဒလိဒ္ဒကာလ-ကြည့်။ ဒလိဒ္ဒဘယ，ဒလိဒ္ဒေါပစ္ဆေဒနဋ္ဌ-တို့ကြည့်။ ဒလိဒ္ဒသမာစာရ-ကြည့်။ ဒလိဒ္ဒသုတ္တ-လည်းကြည့်။ မူရင်းကြည့်ပါ။
ဘူ = ဒုဂ္ဂတိယံ-ဆင်းရဲနွမ်းပါးခြင်း၌။ ဒလိဒ္ဒတိ။
daḷidda：dalidda a．m．[Sk．daridra] 貧しき，困窮の，乞食．~kammakāra贱しい傭人
Daḷidda，﹐Dalidda（Sk．daridra，to daridrāti），【形】【名】穷，贫穷；浪子，贫穷的人（vagrant，strolling，poor，needy，wretched；avagabond，beggar）。
daḷidda：[adj.] poor； needy；apoor person.
DAḶIDDA：[a] nghèo，người nghèo khổ，người thiếu thốn，bần cùng，
（၁） မရှိ-ဆင်းရဲ-သော သူ။ သူဆင်းရဲ၊ အောက်တန်းစား၊ （က） ခက်ခက်ခဲခဲ တောင်းရမ်းနိုင်မှ လိုရာရသော၊ ဆင်းရဲငြိုငြင်စွာ အသက်မွေးရသော၊ ဥစ္စာ-မဲ့-မွဲ-ပစ္စည်းနဲ-နွမ်းပါး-သော၊သူ။ （ခ） ဗောဇ္ဈင်တရား မရှိသော၊ သူ။ （ဂ） သူတော်ကောင်းတရား ခုနစ်ပါး မရှိသော၊ သူ။ （ဃ） သြဇာအာဏာမရှိသော၊ အစိုးမရသော၊ သူ။ （င） အထီးကျန်သော၊ ခိုကိုးရာ မဲ့သောသူ၊ သနားထိုက်သော၊ သူ။ （၂） ဆင်းရဲနွမ်းပါးရာ အခါစသည်။ （၃） ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူ၏ အဖြစ်။ （၄） လျော့ပေါ့-လျော့ရဲသော-အကျင့် စသည်။ （၅） ဒလိဒ္ဒသုတ်။ （ဆင်းရဲ-နွမ်းပါး-သော၊ လိုလျက် နေသော၊ မွဲသော၊ ဖြုခါသော။ P.S.D.）။ ဒလိဒ္ဒကာလ-ကြည့်။ ဒလိဒ္ဒဘယ，ဒလိဒ္ဒေါပစ္ဆေဒနဋ္ဌ-တို့ကြည့်။ ဒလိဒ္ဒသမာစာရ-ကြည့်။ ဒလိဒ္ဒသုတ္တ-လည်းကြည့်။ မူရင်းကြည့်ပါ။
与 Dalidda 相似的巴利词：